Gen Muungaaab”Dowladda hoose Ee Xamar iyo Shacabka Gobolka ayaa iska kaashanaya Nadaafada” |
Gen Muungaaab”Dowladda hoose Ee Xamar iyo Shacabka Gobolka ayaa iska kaashanaya Nadaafada”
buy Kamagra Chewable online, generic Zoloft.
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo ay wehliyaan qaar ka mid ah Gudoomiyaasha Degmooyinka Gobolka ayaa Xalay waxaa uu Kormeeeray Qaybo ka mid ah Wadada makah al Mukarama oo ay ka socdaan olole nadaafadeed oo Qashinka looga qaadayo Wadadaas.
Gudoomiyaha ayaa waxaa uu Goobaha uu kormeeray kula kulmay shaqaalaha Nadaafada ka wada Wadada oo uu ku Bogaadiyay shaqada ay hayaan waxaana uu Gudoomiyuhu socod ku maray Laamiga Sayidka ilaa Isgooska Dabka Iyadoo la arkayay Gawaarida Qashinka qaada oo Howsha halkaa ka wada.
Muungaab oo Saxaafada kula hadlay Halka ay ka socotay Howshaas nadaafadeed ayaa waxaa uu sheegay in Dowladda Hoose Ee Xamar iyo shacabka Magaalada oo is kaashanayaa ay Dar dargalin ku sameeyeen Ololaha Nadaafadeed Ee Casimada ka socda waxaana uu shacabka ka codsaday in ay kala shaqeeyaan Maamulka nadaafada oo ah Bilicda Magaalada.
“Dowladda hoose Ee Xamar iyo Shacabka in ay iska kaashadaan ayay ku soo Noqo kartaa Quruxda Magaalada iyo in qashinka laga sifeeeyo Runtii Waxaan Xiriir la sameynay Shirkado Soomaaliyeed oo aan weydiisanay in ay naga Gacansiiyaan Howshaan Nadaafada ah Dowladda hoose awoodeedaa yar Muqdisho aan quruxdeeda si wada jir ah u soo celino “ayuu yiri Muungaab.